» कोरोना सङ्क्रमितको अनुभव: आफ्नो रक्षा आफै गरौँ, सरकारको दुरगामी योजना छैन
कोरोना सङ्क्रमितको अनुभव: आफ्नो रक्षा आफै गरौँ, सरकारको दुरगामी योजना छैन
जनतालाई घरभित्र थुन्दैमा कोरोना नियन्त्रण हुन्छ र?
१२ भाद्र २०७७, शुक्रबार १८:१२
काठमाण्डौ – छ महिना अघिसम्म नेपालीलाई लागेको थियो, नेपालमा कोरोना आउँदैन । आए पनि धेरै दिन टिक्दैन । नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमताको सामु कोरोना भाइरसको केही लाग्दैन । अरुले मात्रै हो र ? डाक्टरहरु पनि यसो भन्थे । तर सबैको अनुमान र विश्लेषण फेल खायो । कहिले र कसरी नियन्त्रण हुन्छ भन्ने अनुमान नै गर्न नसकिने गरी अहिले कोरोनाको ग्राफ दिनदिनै उकालो चढ्दैछ ।
कोरोनाको जोखिम घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको यो बेला के गर्ने त ? कोरोनासँग लुक्ने कि मुकाबिला गरेर अगाडि बढ्ने ? एकथरी भन्छन्, अब कोरोनासँगै बाँच्न सिक्नुपर्छ । लुकेर होइन, जुधेर अगाडि बढ्नुपर्छ । कोरोना भनेको रुघाखोकी जस्तै हो, यसबाट बच्दै आफ्नो दैनिकी चलाउनुपर्छ । तर अर्काथरी भन्छन्, कोरानाबाट बच्न सकेसम्म घरभित्रै बस्नु नै राम्रो हुन्छ । सामान्य दैनिकीमा फर्कन हतार गर्नु हुँदैन, पहिले स्वास्थ्य अनिमात्र अरु कुरा ।
सङ्क्रमितको पहिचानसँगै आइसोलेशन निर्माण, अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायत अत्यावश्यक काममा पनि सरकारको ध्यान गएको छैन । न लकडाउन र निषेधाज्ञाले कोरोनाको जोखिम घटेको छ, न त कोरोनाकै बीच जनजीवन चलायमान बनाउने अवस्था छ । कोरोनाबाट लुकेर र भागेर पनि सकिँदैन, कोरोनासँग जुध्न पनि गाह्रो छ भन्ने अहिलेको अवस्थाले देखाएको छ ।
कोरोनाबाट बच्न साबुनपानीले हात धुनुपर्छ, बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउनुपर्छ र अरुबाट टाढा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा अब सबैलाई थाहा भइसक्यो । त्यसो त हात धुने र मास्क लगाउने बानीले कोरोना मात्रै होइन अरु रोग पनि घटाएको हुनुपर्छ । तर जमघटबाट टाढा र भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्ने बाध्यताले धेरैलाई मानसिक समस्या पनि थपेको छ । कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न क्वरेण्टीन र आइसोलेशनमा एक्लै बस्दा उदास र निराश हुनेहरु बढेका छन् । लकडाउन र निषेधाज्ञाले एक्लोपना बढाएको छ ।
मिलन तिमिल्सिना- उज्यालो अनलाइन